Nchara GPU, usoro ngwaọrụ iji zụlite mkpuchi na nchara | Site na Linux
Rust GPU, ngwa ọrụ eji etolite igwe eji ajị anụ na Rust
Ọchịchịrị | | Egwuregwu, Noticias
Developmentlọ ọrụ mmepe egwuregwu Embark Studios weputara nnwale izizi izizi nke oru ngo Nchara GPU, nke choro iji asusu Rust ịzụlite koodu GPU.
Ọchịchọ iji nchara dee mmemme maka GPU na-esiteghị na njirimara nchekwa na arụmọrụ dị elu, kamakwa mkpa inweta ngwaọrụ nke oge a iji rụọ ọrụ na nchịkọta na modulu iji melite arụmọrụ nke usoro mmepe.
Companylọ ọrụ mmepe nchara GPU Embark Studios na-ejikwa Rust na igwe egwuregwu ya ọ na-arụkwa ọrụ iji kwado mgbanwe nke nchara nchara n'etiti CPU na GPU.
Dị ka ha si kwuo, n'akụkọ ihe mere eme, na egwuregwu, GPU mmemme ka emeela site na ịde HLSL ma ọ bụ, na obere, GLSL. Ndị a bụ asụsụ mmemme dị mfe nke sitere na ịsụgharị APIs kemgbe ọtụtụ afọ.
Agbanyeghị, dị ka injin egwuregwu gbanwere, asụsụ ndị a enyebeghị usoro maka ịmekọrịta nnukwu koodu ntọala yana, n'ozuzu, ha ahapụla ya ma e jiri ya tụnyere asụsụ mmemme ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ ọzọ ka mma maka asụsụ abụọ ahụ, ọ nweghị nke nọ n'ọnọdụ iji dochie HLSL ma ọ bụ GLSL.
Ma ọ bụ n'ihi na ndị na-eweta ọrụ egbochiri ha ma ọ bụ n'ihi na ha anaghị akwado ha na omenala ndịna pipeline. Ihe atụ nke a gụnyere CUDA na OpenCL. Ma mgbe emere mbọ iji mepụta asụsụ na oghere a, ọ nweghị onye n'ime ha enwetala traction pụtara ìhè na obodo gamedev.
Rust GPU na-aga n'ihu ịzụlite echiche sitere na ọrụ RLSL, nke a gbara mbọ imepụta ihe nchara na SPIR-V generic shader intermediate, nke a na-atụ aro na Vulkan API ma kwado ya na OpenGL 4.6.
Na ọkwa mmepe ya ugbu a, Rust GPU na-enye gị ohere ịme ọsọ ọsọ eserese wee chịkọta akụkụ dị mkpa nke ọbá akwụkwọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ. N'otu oge ahụ, ọrụ ahụ ka dị njikere maka iji ya mee ihe n'ụzọ zuru oke, dịka ọmụmaatụ loops adịghị akwado site na shaders.
Na Embark, anyị na-ewu ụlọ nke onwe anyị egwuregwu site na ncha na nchara. Anyị nwere ahụmịhe gara aga na mmepe ụlọ nke ngosipụta RLSL ma anyị nwere otu ndị injinia na-enye nsụgharị maara nke ọma nke nsogbu nke asụsụ taa, ma site na egwuregwu, injin egwuregwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, anyị kwenyere na anyị nọ n'ọnọdụ pụrụ iche iji gbalịa idozi nsogbu a.
Anyi choro ime ka mmepe nke ulo anyi di nma site na iji otu asusu di egwu, wuo ndi mmadu na-emeghe ihe omuma na ihe ndi ozo, ikwado nkesa nke di n'etiti GPU na CPU, nke kachasi mkpa - mee ka ndi oru anyi (ndi mmadu) na ndi ozo nwee ngwa ngwa mepụta ahụmịhe na mmekọrịta.
Dabere na koodu dị na asụsụ Rust, e guzobere ihe nnọchianya nke SPIR-V shaders, maka onye ọgbọ ya ka e mepụtara nkwado pụrụ iche maka nchịkọta Rust, nke na-arụ ọrụ site na iji ihe atụ na cranelift code generator ji aka kpokọta ihe nnọchiteanya Mgbakọ Weebụ.
Approachzọ dị ugbu a bụ ịkwado Vulkan Graphics API na echiche SPIR-V, ma a na-ezube ndị na-ewepụta ihe maka ọdịnihu nke echiche DXIL (DirectX) na WGSL (WebGPU). Owuwu na Cargo na crates.io, a na-emepe ngwa oru iji zụlite ma bipụta nchịkọta na ndò na ụdị SPIR-V.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na nchekwa nke ọrụ ahụ, njikọ ahụ bụ nke a.
Maka ndị nwere mmasị ịmara koodu ahụ, ha kwesịrị ịma na ebipụtara koodu ahụ n'okpuru ikikere MIT na Apache 2.0 yana ọ ga-ekwe omume inweta ya site na njikọ dị n'okpuru.
Ha nwekwara ike ịkpọ akwụkwọ ahụ, nke edozigoro maka ndị mmepe ka ha nwee ike rụọ ọrụ na Linux, Windows na Mac. kpọtụrụ onye ndu na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Rust GPU, ngwa ọrụ eji etolite igwe eji ajị anụ na Rust
Nchara na-apụ, na-atụ anya na ọ bụghị "Scala na-egbu egbu" ọzọ.
Node.js 15.0 biara na mmelite na NPM, V8 na ndi ozo
Onye ọzọ dara na GitHub, ugbu a ọ bụ ntụgharị nke youtube-dl